Boqor Burhaan Boqor Muuse oo la kulmay waxgaradka Gobolka Mudug – Radio Daljir
Boqor Burhaan Boqor Muuse oo la kulmay waxgaradka Gobolka Mudug
Juunyo 9, 2015 3:33 b 0
Talaado, Juun 09, 2015 (Daljir) — Boqor Burhaan boqor Muuse ayaa shalay soo gaaray magaalada Gaalkacyo,markii ugu horreeysay tan iyo markii loo caleema-saaray boqorka beelaha Daarood,siweyn ayaana loogu soo dhaweeyay.
Boqorka ayaa xalay ku hoyday xarunta gobolka Mudug,waxaana soo dhaweyntiisa shalay ka qayb-galay mas’uuliyinta gobolka,degmada,odayaasha dhaqanka,wax-garad,haween,dhallinyaro iyo xubno ka socday ururada bulshada.Soo dhaweyn kaddib boqorka ayaa loo soo gudbiyay hoyga laga dajiyay magaalada Gaalkacyo,halka oo u si kooban saxaafadda ugula hadlay,waxuuna ka warbixiyay safarkiisa.
Boqor Burhaan ayaa ugu horreeyn u mahadceliyay maamulka iyo bulshadii Gaalkacyo oo saacado ku sugayay garoonka diyaaraha magaalada Gaalkacyo,halka oo ay keentay diyaarad ka soo qaaday Muqdisho.“Aadban ugu faraxsanahay inan imaado Gaalkacyo,waxaan u mahadcelinaya shacabka iyo maamulka oo si wanagsan ii soo dhaweyeey,”ayuu yiri boqor Burhaan oo inta ku daray inuu ku sugnaan doona magaalada Gaalkacyo maalmo.
Intaas kaddib boqorku waxuu kulamo gaar gaar ah la qaatay qar ka mid ah isimada gobolka Mudug,saxaafadana banaanka ayay ka jogtay,balse boqor Burhaan oo si kooban ula hadlay warbaahinta waxuu sheegay isimmada inay kala xog qaadanayeenIsimmada uu la kulmay boqorka waxaa ka mid ahaa,Islaan Bashiir Islaan Cabdulle, Suldaan Cabdiqani Xasan iyo isimmo kale oo ay waheliyeen qar ka mid ah wax-garadka gobolka Mudug.
“Kulamada waxaa ay ahaayeen oo an ilaa caawa qaadanayay kuwo is xog wareysi ah oo isimmada uu ka mid yahay Islaan Bashiir waxay i siinayeen warbixinno anna warbixino ayaan siinayay la xiriirta safarkeyga,”ayuu yiri Boqor Burhaan.Ugu dambeyn,Waxuu sheegay boqorku inuu kulan weyne la qaadan doono wax-garadka iyo qaybaha bulshada Gaalkacyo,balse ma uusan faah faahin safarro muddo qaatay oo u ku tagay dalal dhowr ah iyo magaalada Muqdisho oo u hadda ka yimid.
Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalah Puntland oo Guddoomiye Dhalinyaro cusub u magacowday Gobolka Bari
Madaxweyne Obama oo ka hadlay Fadeexadda FIFA